WHO: Dunidu waxa ay wajaheysaa khatartii ugu badneyd ee COVID-19 - Tilmaan Media
WHO: Dunidu waxa ay wajaheysaa khatartii ugu badneyd ee COVID-19
Hay’adda Caafimadka Adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa ka digaty in dunidu ay ku adkaan doonto in si degdeg ah ay uga lug baxdo cudurka Korona feyras iyada oo ay waddama badabn diiwaan gelinayaan kiisaskii ugu badnaa si maslinle ah.
Hay’adda WHO waxay sheegtay 24-kii saac ee ugu dambeeyey in dunida laga diiwaan geliyey 106,000 oo kiisas cusub ah.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Caafimadka Adduunka Dr Tewedros Adhanom Gabreyesus ayaa walaac ka muujiyey kiisaska cusub ee soo kordhay xilli dhaqaalaha dunida uu hoos u sii dhacayo cudurka awgii.
Xeel-dheerayaasha caafimaadkuna waxay ka digeen tirada kiisaska cudurka ee dunida oo haatan lagu sheegay ku dhawaad 5 malyan iney aad ugu badan tahay tirada rasmiga ah dadka uu cudurka haleelay, waddamada qaar ayaa jira oo aan baaritaanno badan sameynin taas oo sii murjineysa walaaca dunida ee COVID-19.
In ka badan 326,000 oo qof ayaa cudurkan aafada noqday ee Korona dunida ugu geeriyooday, sida ay tibaaxeyso xogta laga helayo Jaamacadda John Hopkins oo diiwaangeliso kiisaska cudurka ee dunida.
Dr Tewedros waxaa kale oo uu ka digay iney weli dunida u baahan tahay wakhti dheer si ay cudurkan safmarka ay uga lug baxdo.
Digniinta Agaasimaha WHO ayaa ku soo beegmeysa xilli ay waddama badan oo uu Mareykanka ka mid yahay ay billaabeen in ay xayiraadaha iyo bandowga ay horay u soo rogeen ay dabciyaan.